Kutheni Us | I-FELVIK Eyelashes Co, Ltd.
I-Felvik, luhlobo lwase China olubhalisiweyo lweeFake Eyelashes kunye nezinye izinto ezinxulumene neEyelashes.
Ngeofisi yokuthengisa ebekwe eChengdu, kwiphondo laseSichuan, esona sixeko siphucukileyo sikumazantsi mpuma eTshayina kunye nomzi mveliso obekwe e-Inner Mongolia, kanye eMantla e-China, u-Felvik uzibophezele ekuboneleleni ngee-eyelashes ezikumgangatho ophezulu ngenkonzo yabathengi efanelekileyo, nokuba umkhulu okanye encinci okanye ukuqala nje ishishini, yonke imicimbi kuFelvik. UFelvik ubonelela ngeeFake Eyelashes kwihlabathi liphela.
Umgca weMveliso yeFelvik Eyelashes
I-Eyelashes eyi-Real Mink eyinyani
I-Silk Fake Eyelashes
Kutheni usebenza noFelvik
Amava aTyebileyo kunye neqela leNgcali ekubonelela ngeemveliso eziphambili zekhope kunye nenkonzo, ukuze uxhase ishishini lakho kwiiMveliso zeEyelashes nakwezinye iinkalo ezininzi zobuhle. Abantu baseFelvik banomdla ngomonde; baya kukunika amava amnandi.
Ngaphezulu kwama-500 ezimbo zokukhetha. Isampulu kunye neefoto zakho ziyafumaneka ukuze kuvavanywe isampulu.
Ukupakishwa kwe-eyelashe yesiqhelo kunye nezinye ii-odolo zezixhobo zokuhombisa zamkelekile.
Zonke izinto zethu ezibonakalayo zinolawulo olungqongqo lomgangatho kwaye zonke iimveliso zenziwe ngesandla ukuqinisekisa umgangatho.
Iinwele ze-mink esizisebenzisileyo yi-100% yoboya be-mink yokwenyani, i-fluffy, idrama, ithambile. Zonke ii-eyelashes zethu ezinokuphinda zisebenzise ziyakwazi ukusebenzisa amaxesha angama-20-25 ngokuphathwa ngendlela efanelekileyo.
Flexible Order Ubungakanani
Ubuncinci be-Order encinci yoBungakanani beemveliso ezingathathi hlangothi kunye nesicelo esifikelelekayo se-MOQ seemveliso ezenziwe ngokwezifiso
Iqela leFelvik libonelela ngenkonzo ye-OEM kunye ne-ODM yemivimbo kunye nokupakisha. Iqela le-Felvik loyilo lobuchwephesha liya kukunceda ukonyuse ishishini lakho lemivumbo ngokuyila iipakethe zesiko kunye nelebheli yakho yabucala. Ukwenza ukuba izimvo zakho zizaliseke, uFelvik unabaqulunqi abaziingcali ukwenza uyilo lwebhokisi.
Umgangatho uhlala ungundoqo ekukhuleni kweshishini. UFelvik unolawulo olungqongqo lomgangatho wazo zonke izinto ngaphambi kwemveliso kunye nolawulo lomgangatho olungqongqo kuzo zonke iimveliso ezigqityiweyo ngaphambi kokuziswa, zonke iimveliso ozifumanayo kuthi ziqinisekisiwe ngomgangatho. I-100% yenkonzo emva kokuthengisa xa isikhalazo senzekile.